सैफ अलि खानको परिवार जोखिममा भएको समाचार आएसँगै सुरक्षा बढाइयो, उनको घर अगाडी ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी गरियो तैनाथ, के हो खास कुरा ? – Gazabkonews
सैफ अलि खानको परिवार जोखिममा भएको समाचार आएसँगै सुरक्षा बढाइयो, उनको घर अगाडी ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी गरियो तैनाथ, के हो खास कुरा ?
सैफ अलि खानको परिवार जोखिममा भएको समचार आएसँगै सुरक्षा बढाइयो, उनको घर अगाडी ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी गरियो तैनाथ, के हो खास कुरा ?
एजेन्सी । बलिउड कलाकार सैफ अलि खानले अभिनय गरेको टेलिभिजन वेब सिरिज ‘ताण्‍डव’ का कारण उनको परिवार जोखिममा परेको छ । उनको घर अगाडी प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा बढाइएको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का सांसदसहित कार्यकर्ताहरु र हिन्दु धार्मिक संघसंगठन कडा विरोधमा उत्रिएका छन्। जसको असर सैफको परिवारमा पनि पर्न सक्ने आँकलन गरेर सुरक्षा बढाइएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बान्द्रास्थित निवासमै हमला हुनसक्ने देखेर घरबाहिर प्रहरी परिचालन गरिएको हो। सो सिरिजमा हिन्दु धर्म र खासगरी भगवान शिवलाई लिएर अवव्याख्या गरिएको छ । भगवान शिवलाई मजाक बनाइएको भन्दै विरोध गरिएको हो ।
ताण्डवको प्रदर्शनमा रोक लगाउन र कलाकार, निर्देशक र निर्मातामाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै बीजेपी विधायक राम कदमले मुम्बईको घाटकोपर पुलिस थानामा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनले अनेजनविरुद्ध पनि मुद्दा दिएका हुन्। जसका कारण सैफको घरमा सुरक्षा बढाइएको हो ।
यसैगरी बीजेपीका अर्का सांसद मनोज कोटक पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । उनले पनि सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरलाई पत्र लेखेर उक्त वेब सिरिजमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्। निर्माताले नियतवश हिन्दु देवीदेवताको मजाक उडाएको र धार्मिक भावनाको अपमान गरेको उनको दाबी छ।
यसैबीच आजै विधायक राम कदमको अगुवाईमा मुम्बईमा सिरिज र प्रदर्शन गर्ने अमेजनविरुद्ध प्रदर्शन हुने भएको छ। उनले अमेजनलाई बहिष्कार गर्न अपिल समेत गरेका छन्। उनले अमेजनविरुद्ध ‘जुते मारो’ आन्दोलन गरिने चेतावनी दिएका छन्।
भारी वर्षाका कारण घर भत्किएपछि विचल्नीमा परेका साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका ७३ वर्षीय मानबहादुर खत्री र उहाँकी ७१ वर्षीया श्रीमती छलिमायाँ खत्रीका लागि स्थानीय बासिन्दाले चन्दा उठाएरै नयाँ घर निर्माण गरिदिएका छन् । गत असार ३२ गते राति परेको भारी वर्षाका कारण घर भत्किएपछि विचल्लीमा परेका खत्री दम्पत्तीको घर पुनःनिर्माणका लागि आफन्त तथा शुभेच्छुकले चन्दा सङ्कलन गरेर दुईतले नयाँ घर निर्माण गरिदिएका हुन् ।
यो पनि : राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सेनाको वर्चश्व
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा सञ्चालित १०औँ पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ¥याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेपाल आर्मीको वर्चश्व रहेको छ । गोलबजार नगरपालिका र राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन सङ्घको आयोजनामा गोलबजारस्थित कवर्डहलमा आइतबार साँझ सम्पन्न नौं इभेन्टस्मा भएको खेलमा नेपाल आर्मीका खेलाडीले वर्चश्व कायम गरेका हुन् । पुरुष डबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका नवीन श्रेष्ठ र रत्नजित तामाङले प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । आर्मीकै पविन र लिन्थेप र सरोज महर्जनलाई पछि पार्दै श्रेष्ठ र तामाङले प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुभएको हो ।
महिला तर्फको डबलमा पनि आर्मीकै अनिता गिरी र रसिला महर्जन विजयी हुनुभएको छ । एपिएफका जेसिका गुरुङ्ग र सुनयना मुखियालाई पराजित गर्दै गिरी र महर्जनको जोडी प्रथम हुनुभएको जनाएको छ । एकल ब्वाइज अण्डर १७ तर्फ पनि आर्मीले नै सफलता हात पारेको छ । आर्मीका भोजबहादुर गुरुङले आर्मीकै आयुस्मान नगरीलाई पराजित गरेका हुन् । त्यसैगरी गल्स अण्डर १७ अन्तर्गत आर्मीकै रसिला महर्जन प्रथम भएकी छन् । उनले विराटनगर ब्याडमिन्टन क्लबका रोज पाण्डेलाई पराजित गरेकी हुन् । एकल पुरुषतर्फ कैलालीका देवराज रानाले आर्मीका दिवस शङ्करलाई पराजित गर्दै प्रथम भएका हुन् ।
प्रतियोगिता पश्चात आयोजित पुरस्कार वितरण तथा समापन कार्यक्रममा गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख देवनाथ साह, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का केन्द्रीय सदस्य सुवास श्रेष्ठले विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।
कृषि मिटरको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने
सिँचाइ र मलखादको अभाव झेल्दै आएका किसानको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले तिर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको सम्पन्न आठौं गाउँसभाले सिँचाइ, मलखाद र बीउबिजनलगायतका समस्याका कारण मारमा परेका किसानले सिँचाइका लागि जडान गरेको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने निर्णय गरेको हो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी २०७८ वैशाखदेखि कृषि मिटरको महसुल गाउँपालिकाले नै तिरिदिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि विद्युतीकरणमा गाउँपालिकाले ८० प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको र बाँकी २० प्रतिशत काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । शिक्षाको स्तरोन्नतिको निम्ति विभिन्न खालको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरिने र स्वास्थ क्षेत्रलाई मजबुत पार्न कोरोना अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।